MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Fernando Julio Antonio Quiros Campos as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Peru to the Republic of the Union of Myanmar
48th ASEAN Day Commemorating Ceremony
Myanmar has agreed to the proposed appointment of Mrs. Eva HAGER as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Austria to the Republic of the Union of Myanmar
H.E. Daw Ei Ei Khin Aye Presents Credentials to President of Indonesia
H.E. U Myint Swe appointed as Non-Resident Ambassador of Myanmar to Kenya
H.E. U Hau Do Suan Presents Credentials to Governor-General of Jamaica
H.E. U Sein Oo presented Credentials to the King of Malaysia
by adminmofa on 29/07/2017 at 7:21 PM
Posted In: MOFA News, Press Release
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Fernando Julio Antonio Quiros Campos as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Peru to the Republic of the Union of Myanmar. He will reside in Bangkok.
Mr. Fernando Julio Antonio Quiros Campos earnedaBachelor of Law from Catholic University of Peru in 1983 andaMaster’s degree in International Relations from Graduate Institute of International Studies, Geneva, Switzerland in 1993. He joined the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Peru in 1986. Since then, he has served at the Ministry of Foreign Affairs as well as in Permanent Mission, Embassies and Consulate General in Geneva, Caracas, and Washington D.C., in various capacities. From 2017 to date, he has been serving as Ambassador of the Republic of Peru to the Kingdom of Thailand. Mr. Fernando is married, and has three children.
Dated: 29th July 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပီရူးသမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စတာ ဖာနန်ဒို ဟိုလီယို အန်တိုနီယို ကေးရုစ် ကမ်ပို့စ် အား ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဗန်ကောက်မြို့တွင် အခြေစိုက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ဖာနန်ဒို ဟိုလီယို အန်တိုနီယို ကေးရုစ် ကမ်ပို့စ် သည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ပီရူးနိုင်ငံ ကက်သလစ်တက္ကသိုလ်မှ ဥပဒေဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးတက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး မဟာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ပီရူးသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဂျီနီဗာမြို့၊ ကာရာကတ်မြို့၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့များရှိ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ သံရုံး နှင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးတို့တွင် ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ယခုလက်ရှိအချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပီရူးနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ မစ္စတာ ဖာနန်ဒိုသည် အိမ်ထောင်သည် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ သားသမီး ၃ ဦး ထွန်းကားသည်။
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်။
Ministry of Foreign AffairsMyanmar
Countries having Diplomatic Relations with English(PDF)